Sida loo kariyo jelly currant cas for jiilaalka
Sida loo abuuro iyo daryeelka loogu talagalay currants madow
Waa maxay faa'iido of currant madow? Currant Black waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah midhaha ugu faa'iido leh oo dhadhan fiican leh. Dub currant waxaa loo isticmaalaa daawooyinka, karinta. Waxaa loo isticmaalaa ka hortagga cudurrada qaarkood. Cagaarka madow wuxuu bixiyaa jirka bini'aadamka oo leh noocyo kala duwan oo fiitamiin ah (A, fitamiino E, B, C, H koox), microelements (fluorine, birta, iodine, copper, cobalt, zinc, manganese), macrocells (kalsiyum, potassium, fosfoorus, calcium).
Waxay noqotay caado u ah noo xagaaga si ay u soo ururiyaan berry currant madow iyo berry cas. Waa labada nooc ee currants ayaa muddo dheer qaadatay xididaha aagaga. Laakiin dad yar ayaa ogaanaya noocyo kala duwan oo berri ah - currant dahab ah, magaca labaad oo ah "krandal". Waqooyiga Ameerika waxaa loo tixgeliyaa meesha uu ku dhashay ee noocan oo kale ah ee currant, halkaas oo aagga u dhexeeya waqooyi galbeed iyo Mexico ay baadiyaha ay u koraan si madaxbanaan, iyada oo aan gargaar aadanaha.
Sida loo ilaaliyo currants ka soo cayayaanka
Waxaan soo dhaweynaynaa dadka jecel beerta! Maqaalkani wuxuu diiradda saari doonaa cayayaanka currant. Waxaan kuu sheegi doonnaa waxa cayayaan kasta oo ah, inta uu dhaawac u geysan karo baadiyaha baadiyaha iyo sida loola dagaalamo. Ma taqaanaa? Casiirka madow ayaa loo isticmaalaa si loogu diyaariyo dhuxusha cuntada.
Sida loo daweeyo currants cudurrada
Currant waa geed buundo ah oo gaari kara 2.5 m dhererka. Caleemaha cirridku waxay leeyihiin ilko waaweyn oo ka soo baxa geeska, nooca berry waxay gaareen ilaa 1 cm dhexroor iyo leh ur xoog leh. Siciradu waxay ku kori karaan hadhka, laakiin aag aad u wanaagsan ayaa noqon kara ciidda meel qorrax leh oo iftiin leh. Berry currant ku jira vitamiin badan, asiidhyada organic, micro-iyo macronutrients.
Qaar ka mid ah xeerarka iyo talooyin ku saabsan daryeelka ee currant cad
Maanta waxaan ka hadli doonaa currants cad. Waxaan kuu sheegi doonaa sida loo abuuro currant caddaan guga, dooro meel beeritaanka iyo carrada ku habboon. Ka dib markaad aqriso maqaalkan, waxaad yeelan doontaa aqoon ku filan inaad ku koro currants caafimaad leh iyo dhaxan. Ma taqaanaa? Currant waxaa loola jeedaa amarka lagu xakameynayo.
Lacagaha waxaa laga heli karaa beerta oo dhan, maadaama ay tahay caano aad loo jecel yahay. Taasoo ah currant madow waa kuwa ugu caansan dadka kale (casaan iyo dahab). Dareemka madow waa mid hodan ku ah faytamiinada oo ka badan 5 daqiiqo oo ah feejignaanta, miraha liinta 8 jeer, tufaax iyo isteroberi 10 jeer, iyo canab by ku dhowaad 100 jeer.
Sida loo takhaluso aphids on currants
Currant waa mid ka mid ah dalagyada ugu badan ee laga helo berri-caleemaha. Goobaha qiimaha leh ee aan qabyo ahayn ee daryeelka, geedka, cagaarka udgoon iyo berry delicious, hodan ku ah vitamiin iyo microelements. Wixii beerista si guul leh ee dalagyada waa in la caddeeyo sida loo xaliyo aphids on currants - cayayaan caddaalad caadi ah.
Ku dhowaad dhammaan beeralayda iyo mulkiilayaashu waxay door bidaan beerashada. Meelaha badanaa waxaannu la kulannaa currant madow (Ribes nigrum), casaan (Ribes rubrum) iyo currant cad (Niveum ribes), iyo currant huruud ah ayaa dhawaan noqday dad caan ah. Cudurada lacagaha ah iyo daaweyntooda Haddii aad rabto in baadiyaha ay kuugu raaxaysato adiga oo leh miro ka yimaada sanadka ilaa sanadka, ka dibna waa inaad ogtahay oo kaliya ma aha oo kaliya habka daryeelka, laakiin sidoo kale currants iyo cayayaanka ee currants.
Daryeelka loogu talagalay currants guga: manjooyin, quudin, ilaalin cudurada iyo cayayaanka
Dub, casaan iyo xitaa currant caddaan yihiin dalagyo caan ah oo ku jira cirqiga, sidaas darteed, dad badan oo xagaaga soo socda ayaa xiiseynaya daryeelka currant ka dib jiilaalka. In this article waxaan ka hadli doonaa ku saabsan nuuca of manjooyin, quudinta, waraabinta iyo processing ka cayayaanka dhirta kuwaas, iyo sidoo kale ku saabsan arrin ilaalinta duurka ka soo dhaxan guga suuragal ah.
Sida loo daryeelo currants xilliga dayrta, oo ay ku jiraan daryeelka dayrta
Currant waa mid ka mid ah midhaha ugu caansan uguna caafimaad leh, daryeelka xanaanada oo ah ninkii beerta oo idil samayn karo oo inta badan looga baahan yahay xilliga dayrta. Codsigeeda waxaa laga heli karaa cunto karinta iyo daawada labadaba. Xaaladda kowaad, compote iyo macaanka waa la kariyey laga bilaabo berry currant, wada baabbi'iyey cusub, xitaa caleemaha currant waxaa loo isticmaalaa ilaalinta, iyo shaah ah udgoon ayaa laga soo dhajiyay iyaga.
Intaa ka dib si ay u quudiyaan currants guga: bannaanka u talin
Currant waa warshad aan fiicnayn, oo si weyn u soo saara miraha waxtarka leh ee ka soo baxa miro kale si ay u dhadhamiyaan iyo tirada maaddooyinka waxtarka leh. Qiimaha gaarka ahi waa mid aan la qabin. Laakiin wali waa mid miro waaweyn oo waaweyn, waa lagama maarmaan si loo siiyo warshad koronto oo dheeraad ah kobaca sanad kasta. Sidaa darteed, bannaanka daryeeli quudiyo currants guga iyo inta lagu jiro xilli.
Kooxo yaryar oo leh caleemaha currant-gaduud ee casaanka ah ee aagga ayaa ah mid aan caadi ahayn. Waxaa laga heli karaa deyr kasta. Dhammaantoodna, sababtoo ah geedahan aan qabin waxa ay leeyihiin awoodda bogsashada oo dhan oo ah fitamiin iyo macdan. Xitaa awowayaasheen ayaa loogu yeeray midabkooda casaanka inay yihiin ilo qurxoon, xoog iyo wakhti dheer.
Karaaca baadiyaha ah ee baadiyaha ah laguma wareegi karo wax kale. Marka aad dareento noloshaada, waxaad xusuusan doontaa weligaa. Berry, caleemaha, saqafyada - wax walba waa la jilcan yahay waxaas. Sidaa darteed, in Russia, berry this muddo dheer la naaneeyey "currant" (ee Old Church Slavonic, "ur adag"). Marka lagu daro urta, waxay caan ku tahay tayada gaarka ah ee gaarka ah.
White currant: content calorie, ka kooban, hantida faa'iido iyo contraindications
Currant waxaa badanaa lala xiriiriyaa laba nooc oo waaweyn - madow iyo guduud. Marka ugu horeysa, sida aad ogtahay, waxa ku jira waxyaabo badan oo faa'iido leh, laakiin marka la eego tayada dhadhanka ah ee mid kasta oo u adeegsan karo. White currant waa nooca aad u rarro ah ee warshad, iyo weli, by qiimaha, waxaa gabi ahaanba aan ka liidataa casaan "qaraabo".
Qodob caan ah oo loogu talagalay samaynta khamriga madow ee guriga
Khamriga ugu wanaagsan - waa la kariyaa gacmihiisa. Mid ka mid ah nooca ugu caansan ee cabitaanka khamriga waa madow madow. Ka dib markaad akhrido maqaalkan, waxaad baran doontaa sida loo sameeyo khamri siriyaal ah. Black Currant Wine: Liistada Maaddooyinka Samaynta cabitaanka khamriga guriga waa nidaam adag oo dalbanaya.
Sida loola tacaalo dufanka dhalada on currants
Rust waa mid ka mid ah cudurada ugu caamsan iyo khatarta ah ee currants iyo gooseberries. Sharraxaadda, ogaanshaha, daaweynta - waxaan ka sheegi doonaa hoosta hoose. Halista duufaanka Dhirta bukaanku waxay bilaabataa in ay lumiso caleemo, tayada miro ayaa sii xumaato, iyo caabuqa barafku hoos u dhaco. In hababka dheef-shiid kiishashka ah ayaa la jajabiyey, photosynthesis, lumay waayid, uumi biyoodka sii kordhaya.
Sida loo xoqdo currants
Iyadoo aan rejuvenation sanadlaha, duurka currant ma awoodi doonaan in ay isticmaalaan awoodooda buuxda for fruiting badan. Iyo dhammaan sababta oo ah berry waa la xiray si ay laamaha koritaanka sanadii hore, kuwaas oo aan ka badnayn 5 sano. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in laga saaro dhammaan da'da, qallalan, burburay, layskula kulmey midba midka kale iyo faragelinta koritaanka caleemaha cusub.
Talooyinka ugu sarreeya ee daryeelka iyo abuuritaanka noocyo madow oo "Dareemo"
Kala duwan ee currant madow "Yadrenaya" waxaa loo yaqaanaa in ka badan 30 sano. Badeecada beeraha Altai, noocyo kala duwan ayaa isla markiiba lagu dhawaaqay sababtoo ah caabbinta qabow ee sarreeya, dhalidda wanaagsan iyo cabbirka ballaaran ee berry (waxay ahayd mid ka mid ah "giants" ee caalamka currant). Currant "Yadrenaya" waxay sii wadaa inay caan ka noqoto beerta.
Bixiyaan xakamaynta budada budada ah ee loogu talagalay currants
Dhuxul macaan (haddii si kale loo dhigo, dambaska ama dambaska) waa cudur fungal ah oo uu sababo foosha micrro-ficilka ah ee ku nool carrada - amarka loo yaqaano erysipelas. Currant wuxuu ka jiraa fangaskaan. Dhuxul macaanku wuxuu saameeyaa qayb ka mid ah warshadda ka sarraysa dhulka - caleemaha, petioles, burooyinkeeda, geedo iyo caleemaha sanadkan, iyo sidoo kale barta sii kordhaysa.
Waxaan ku koraan currants ka gooyn iyo baradho
Currant waa qoyaan ka mid ah qoysaska miisaanka. Habka loo beerto iyo daryeelidda berry waxay u baahan tahay aqoon iyo xirfad gaar ah. Maqaalkani waxaan eegeynaa sidii loo abuuri lahaa currants guga, iyo sidoo kale soo jeedin talaabo talaabo talaabo tallaabo ah. Goorta la abuuro Dayrta Hore waa waqtiga ugu fiicneyn ee lagu beerayo currants, tan iyo xilliga qaboobaha dhulka hareeraha baadiyaha iyo dhumucdiisuna, taasoo gacan ka geysta horumarinta wanaagsan ee berry.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Currant 2020